compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ် ဦး ကဆုံးဖြတ်ချက်မချချဉ်းကပ်။ သက်သေသာဓကအကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းဤရောဂါကိုတိကျစွာရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးပြီးအောင်မြင်စွာကုသနိုင်သည် (Your Brain On Porn - 2018)
လက်ရှိစိတ်ရောဂါကုသမှု, Jon E. Grant၊ JD, MD, MPH၊ ပါမောက္ခ - စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ၊ ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်၊ ဆေးကျောင်း Pritzker၊ ချီကာဂို၊
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB), ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲသို့မဟုတ် hypersexuality အဖြစ်ရည်ညွှန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူထပ်တလဲလဲနှင့်ပြင်းထန်သောအတွက်အဆက်မပြတ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်, တိုကျတှနျးထားလျက်, တစ်ဦးချင်းစီမှဒုက္ခခံစားခဲ့ရနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူတွေ။ CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုမကြာခဏအလွန်အကျွံဖြစ်ဖို့သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရိပ်မိပေမယ့်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ CSB စိတ်ကူးယဉ်ပါဝင်ပတ်သက်နေနှင့်အပြင်သို့မဟုတ်အပြုအမူ၏အရပျ၌ကတိုကျတှနျးသော်လည်းရောဂါအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်နေ့စဉ်အသက်တာ၌ဆေးပညာသိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့််ရောက်စွက်ဖက်စေရမယ်နိုင်ပါတယ်။
သောကြောင့် CSB အကဲဖြတ်အကြီးစား, လူဦးရေ-based epidemiological လေ့လာမှုမရှိခြင်း၏, အရွယ်ရောက်သူတို့တွင်သည်၎င်း၏စစ်မှန်သောပျံ့နှံ့မသိနိုင်ပါဘူး။ 204 စိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာများ၏လေ့လာမှုတစ်ခု 4.4% တစ်ဦးကလက်ရှိပျံ့နှံ့တွေ့1 တက္ကသိုလ်-based စစ်တမ်း CSB ၏ပျံ့နှံ့မှုမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 2% ခန့်မှန်းနေစဉ်။2 အခြားသူများက, အပျံ့နှံ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအရွယ်ရောက်ပြီး%3မှ 6% အကြားကြောင်းခန့်မှန်းကြ3,4 အထီးထိခိုက်နစ်နာတစ်ဦးချင်းစီ၏အများစု (≥80%) ပါဝင်အတူ။5
CSB များသောအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် / အစောပိုင်းလူကြီးကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာနှင့်ကုသမှုများအတွက်ကိုတင်ပြသူကိုအများဆုံးအထီးဖြစ်ကြသည်။5 စိတ်ကျရောဂါ, ပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်အထီးကျန်ဆန်အပါအဝင်စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များ, CSB ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။6 CSB-related အပြုအမူတွေအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေချိန်တွင်အခြားသူများအရေးကြီးသောအစွမ်းထက်, စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ခဲ့သလိုကျေးဇူးတင်မှုခံစားသတင်းပို့သော်လည်းအတော်များများတဦးချင်းစီ, dissociation ၏ခံစားချက်များကိုသတင်းပို့ပါ။
CSB ဘုံဖြစ်နိုင်ပေမဲ့, ကများသောအားဖြင့် undiagnosed တတ်၏။ ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအလားအလာပြဿနာအပြုအမူမကြာခဏရောဂါမဟုတ်ပါ:
အရှက်ကွဲစေခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်။ အထူးသဟုမေးမဟုတ်လျှင်အနည်းငယ်လူနာကဒီအပြုအမူနှင့်စပ်လျဉ်းသတင်းအချက်အလက်တေနာ့ဝနျထမျးအဘယ်ကြောင့် CSB ဖို့အခြေခံကျနေသောအရှက်, အရှက်ကွဲ, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာရှင်းပြဖို့ပေါ်လာပါသည်။1
အသိပညာ၏ဆရာမရှိခြင်း။ အနည်းငယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများ CSB အတွက်ပညာရေးသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးရှိသည်။ CSB ၏အသိအမှတ်ပြုမှုတစ်ခုမရှိခြင်းလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံမှန်၏ကန့်သတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏န့်အသတ်နားလည်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ (အပြင်, CSB ၏ခွဲခြားရှင်းလင်းသည်နှင့်အပျေါမှာသဘောတူညီခဲ့မဟုတ်သေတ္တာ7-9), နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားစီရငျခကျြကိုမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။10
[သေတ္တာ] အမျိုးမျိုးသောအကြံပြုချက်များ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ၏ခွဲခြားများအတွက်အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးဖွဲ့စည်း, obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါ "obsessive-compulsive ရောင်စဉ်;" စိတ်ဓါတ်များမမှန် ( "တစ်ဦးထိခိုက်စေ spectrum ကိုရောဂါ") မှ7,8; သို့မဟုတ်ကြားဆက်ဆံရေးပြဿနာများ, နွေးထွေးမှုနှင့် Self-လေးစားမှုတစ်ခုလက္ခဏာအဖြစ်။ တစ်ဦးစိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive သို့မဟုတ်တစ်ဦးထိခိုက်စေရောင်စဉ်တစ်ခုခုကိုအတွင်း CSB အုပ်စုခွဲခြင်းလက္ခဏာတူညီ, comorbidities, မိသားစုသမိုင်း, နှင့်ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အခြေခံသည်။ OCD နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များဆင်တူ, CSB လူနာထပ်တလဲလဲအတွေးများနှင့်အပြုအမူသတင်းပို့ပါ။ OCD မတူဘဲ, သို့သော်, CSB များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပျြောမှေ့စများနှင့်မကြာခဏမတရားသောသို့မဟုတ်ရမ္မက်အားဖြင့်မောင်းနှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအဖော်ပြချက်ပေးထား, CSB လည်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်၏ features တွေဝေမျှစေခြင်းငှါ, တစ်ခုစွဲဖြစ်ခြင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုသီအိုရီထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ ရောဂါလက္ခဏာနှင့်အပြုအမူ-အဖြစ်သီးခြားရောဂါသို့မဟုတ်တစ်ခုနောက်ခံပြဿနာတစ်ခုလက္ခဏာအဖြစ်၏ဤစပျစ်သီးပြွတ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်မည်သို့အကောင်းဆုံးအဖြစ်အများကြီးဆွေးနွေးငြင်းခုံနေတုန်းပဲရှိပါတယ်။ DSM-5 တစ်စိတ်ရောဂါရောဂါအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲသတ်မှတ်ဖို့လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်ရှာမခဲ့ပါဘူး။9
တိကျစွာ CSB ဖော်ထုတ်ကြောင့်ရောဂါများအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံနှင့် ပတ်သက်. သဘောတူညီမှုတစ်ခုမရှိခြင်း၏ခက်ခဲသည်။ Christenson et al11 ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်၏ပိုကြီးတဲ့စစ်တမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် CSB များအတွက်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအစောပိုင်း set ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာ CSB ရှာဖွေရေးမှာအောက်ပါ2စံအသုံးပြုသောဤအပြုအမူသို့မဟုတ်အတှေး (1) အလွန်အကျွံသို့မဟုတ်ထိန်းအကွပ်မဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (s) သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး / အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တိုကျတှနျးထားနှင့် (2) / သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြတိုကျတှနျးထား, လူမှုရေးသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်ချို့ယွင်း , ဒါမှမဟုတ်ဥပဒေရေးရာနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးဆက်များ။11,12
အဆိုပါ DSM-5 တည်းဖြတ်မူဖြစ်စဉ်ကိုအတွင်းရောဂါရှာဖွေစံတစ်ခုဒုတိယမြောက်ချဉ်းကပ် hypersexuality ရောဂါများအတွက်အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ hypersexuality များအတွက်အဆိုပြုစံလက်အောက်တွင်အောက်ပါတို့မှ≥3တစ်6လကာလအတွင်းထောက်ခံခဲ့ကြပါလျှင်, ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကရောဂါဖြည့်ဆည်းမည်ဟု: (က) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြင့်စားသုံးအချိန်, တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူတွေကိုအထပ်ထပ် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (အခြားအရေးကြီးသောနှောင့်ယှက် ) ရည်မှန်းချက်များ, လှုပ်ရှားမှုများနှင့်တာဝန်ဝတ္တရား; (ခ) အထပ်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာပါဝငျ, တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ် dysphoric စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များမှတုန့်ပြန်အပြုအမူတွေ; (ဂ) အထပ်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာပါဝငျ, တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုဘဝဖြစ်ရပ်များတုံ့ပြန်အပြုအမူတွေ; (ဃ) ကိုထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်သိသိသာသာသည်ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်လျှော့ချဖို့ထပ်တလဲလဲပေမယ့်မအောင်မြင်အားထုတ်မှု, တိုကျတှနျးထား, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူတွေ; မိမိကိုယ်ကိုသို့မဟုတ်အခြားသူများအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများအတွက်အန္တရာယ်အသကျအန်တရာယျစဉ်နှင့် (င) အထပ်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမြားတှငျပါဝငျခွငျး။9
ရောဂါဤ2အဆိုပြုထားချဉ်းကပ်မှုအတန်ငယ်ဆင်တူသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအဓိကအခြေခံပြဿနာများကိုထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဦးဆောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသွေးသားဆန္ဒရမ္မက်သို့မဟုတ်အပြုအမူပါဝင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါစံသတ်မှတ်ချက်ထဲမှာကွာခြားချက်များ, သို့သော်, CSB ရောဂါ၏ကွဲပြားခြားနားသောနှုန်းထားများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတွက်, ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်သုတေသန CSB အခြေခံသည့် neurobiology ထင်ဟပ်အဖြေရှာတဲ့အရာချဉ်းကပ်နည်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Clinician သူတို့အချို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေဆီသို့သတိလစ်ဘက်လိုက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး "အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ" ဒုက္ခဆင်းရဲ, ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးချွတ်ယွင်း stigmatizing ရှိမရှိစဉ်းစားရန်အဘို့အ CSB တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုမချခင်, ကအရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ (ဥပမာ, ငါတို့အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များအတွက်ရလဒ်မသေးထိုကဲ့သို့သောကျူးလွန်အဖြစ်တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားမရအသက်တာ၌များစွာသောအမှုအရာရှိပါတယ်ကျနော်တို့ကတခြားအပြုအမူတွေထက်ကွဲပြားခြားနားသောစံချိန်စံညွှန်းမှလိင်ကိုင်ထားကြသည်မဟုတ်ဆိုတာသေချာဖို့လိုတယ် ဒီထက်ကျန်းမာအစားအစာရွေးချယ်မှု) ။ ထို့အပွငျအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို LGBTQ တစ်ဦးချင်းစီ, မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဟာပြဿနာတွေ, ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ / ကျားမဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်ပုံမှန်ထွက်လာမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူဆက်နွယ်မည်အကြောင်းတည်း။ ထို့ကြောင့်အပြုအမူသည်ဤစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေရဲ့အခြေအနေတွင်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အမျိုးမျိုးသောစိတ်ရောဂါမမှန်လည်းသူတို့ရဲ့လက်တွေ့တင်ဆက်မှုအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပါဝင်သည်စေခြင်းငှါ, က CSB မှအပြုအမူခွဲခြားရန်အရေးကြီးပါသည်။
စိတ်ကြွရောဂါ။ အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစိတ်ကြွရောဂါအတွက် Manic ဇာတ်လမ်းတွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်နိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးရဲ့စိတ်အခြေအနေတည်ငြိမ်သည့်အခါပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလည်းဖြစ်ပေါ်လျှင်, တစ်ဦးချင်းစီ CSB နှင့်စိတ်ကြွရောဂါရှိနိုင်ပါသည်။ anticonvulsants CSB ၌မိမိတို့သုံးစွဲခြင်းမှ attesting သာအမှုအစီရင်ခံစာများရှိသည်ကြောင့်စိတ်ကြွရောဂါများအတွက်ကုသမှုမကြာခဏ CSB များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ဤအဂုဏ်ထူးအရေးကြီးပါသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအလွဲသုံးစားမှု။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတ္ထုများ, ထိုကဲ့သို့သောကင်းနှင့်အမ်ဖီတမင်းအဖြစ်အထူးသဖြင့်စိတ်ကြွဆေးအလွဲသုံးစားလုပ်အခါအလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်ပွားနိုင်သည်။13 လူတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးအသုံးပြုနေခြင်းမရှိပါအခါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပေါ်ပေါက်မပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်သင့်လျော်သောရောဂါဖြစ်နိုင်ဖွယ် CSB ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) ။ OCD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုမကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ themes များနှင့်အတူသာအာရုံစိုသူတို့အလွန်အကျွံလိင်စဉ်းစားလို့ခံစားရလျက်ရှိသည်။14 OCD နှင့်အတူလူနာလိင်၏အကြံအစည်နှင့်သာအာရုံစိုခံရနိုင်ပေမဲ့, သော့ချက်ခြားနားချက် CSB အစီရင်ခံစာနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဤအတှေးအနေဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခံစားခြင်းနှင့် OCD များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအမနှစ်မြို့ဖွယ်အဖြစ်ကိုရိပ်မိနေကြသော်လည်း, ထိုအပြုအမူကနေအပျော်အပါးရယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အခွားသောရောဂါ ကြောင်း hypersexual အပြုအမူမှမြင့်တက်ချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ neurocognitive မမှန်, အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရောင်စဉ်ပုံမမှန်ခြင်း, စိတ်ကျရောဂါမမှန်ပါဝင်သည်။
ဆေးဝါးများ၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ။ ဒါဟာသူ (သူမ) တစ်ဦးဆေးဝါးစတင်ပြီးနောက် CSB ဖွံ့ဖြိုးရှိမရှိလူနာမေးရန်အရေးကြီးပါသည်။ အချို့သောဆေးဝါးများ (စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိတ္တဆက်ဆံဖို့ဥပမာပါကင်ဆန်ရောဂါအဘို့, ဆေးဝါးများသို့မဟုတ်အညစ်ခြေထောက် syndrome ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ် aripiprazole) လူနာပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။15,16 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလျော့ကျဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးသောက်သုံးသောလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကိုရပ်တန်သောအခါရပ်ရှိလျှင်, CSB တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသင့်လျော်သောဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သုတေသနထိုကဲ့သို့သောခံစားချက်, စိုးရိမ်စိတ်, ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်အဖြစ်ကအနည်းဆုံး 1 သည်အခြားစိတ်ရောဂါရောဂါများအတွက် CSB တွေ့ကြံစံနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တဦးတည်း-တစ်ဝက်အကြံပြုထားသည်။ CSB (N ကို = 103) နဲ့ယောက်ျား၏လေ့လာမှုတစ်ခု 71% ထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါအဖြစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါများအတွက်စိတ်ဓါတ်များရောဂါတစ်ခုစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအတှကျအ 40%, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါအတှကျအ 41% နှင့် 24% များအတွက်စံတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။17 ထိုကွောငျ့, ကိုအောင်မြင်စွာ CSB ဆက်ဆံဖို့, Clinician လည်းမမှန်လိင်အပြုအမူကိုမောင်းဘယ်လောက်နှင့်ဤအဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာ Co-ဖြစ်ပေါ်ဖို့ကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
co-ဖြစ်ပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုလည်း CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားဘုံဖြစ်ကြသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်, လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုများနှင့် HIV / AIDS ရောဂါပါဝင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအထူးကုမှရည်ညွှန်းအတူစိတ်ရောဂါ comorbidities ကုသနှင့်လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးပညာရေးထောက်ပံ့မကြာခဏ CSB ကုသမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
CSB နှင့်မပါဘဲသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြောင်းတစ်ခုမှာပုံရိပ်လေ့လာမှု CSB နှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုတစ်ဦး cue-reactivity ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ MRI တာဝန်စဉ်အတွင်းထိန်းချုပ်မှုဖို့ ventral striatum, anterior cingulate cortex နှင့် amygdala ဆွေမျိုးအတွက်မြင့်မားတဲ့လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။18 မူးယစ်ဆေး-တဏှာ Paradigm သုံးပြီးအကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာဤအတွေ့ရှိချက်မူးယစ်ဆေးစွဲလူနာတွင်တွေ့မြင် activation များ၏ပုံစံများမှမှတ်သားလောက်တူညီပြသပါ။ ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်သုံးပြီး hypersexuality နှင့်အတူလူနာအကဲဖြတ်တစ်ဦးအပိုဆောင်း neuroimaging လေ့လာမှုတစ်ဦးထက်သာလွန်တိုကျရိုကျဒေသအတွင်း prefrontal အဖြူကိစ္စကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပျံ့ CSB နှင့်အတူလူနာကြီးကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။18ဒီလေ့လာမှုကလည်းမှတ်စုများတည်နေရာနဲ့ထိုကဲ့သို့သောရမ္မက်သို့မဟုတ်အပြုအမူ၏ကြိမ်နှုန်းအဖြစ် CSB ရောဂါလက္ခဏာတွေအဘို့အခြုံငုံပြင်းထန်မှုရမှတ်အတွက်လေ့လာပျံ့နှံ့အကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုရှိကွောငျးကိုညွှန်ပြ။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်လေ့လာမှု CSB အတွက်မြင့်မားသော Impulse အစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့်အခြားသောကောင်းကျိုး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ် CSB နှင့်အတူငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးပဏာမအကဲဖြတ်အများအပြားတာဝန်များကိုဖြတ်ပြီးအုပ်စုများအကြားမည်သည့်ခြားနားချက်များကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။18
CSB နှင့်အတူလူအများစုဟာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကဖော်ပြတွန့်ဆုတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အရှိဆုံးဆေးသမားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်တန်း၏မရှိခြင်း၏, အစိတ်အပိုင်းအတွက်, သူတို့ရဲ့လူနာနှင့်အတူလိင်အကြောင်းပြောနေတာယေဘုယျအားဖြင့်မသက်မသာဖြစ်ကြသည်။19 လူနာတွေသူတို့စိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်ကုသမှုကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါခေါင်းစဉ်ဆောင်ခဲ့ဖို့ပိုများပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, Clinician လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ဤလူနာအတွက်ရလဒ်, ဒါမှမဟုတ် comorbid ခွအေနအေဒုက္ခခံစားခဲ့ရတစ်ဦးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယန္တရားနှင့်ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါထည့်သွင်းစဉ်းစားရပေမည်။
CSB ၏ pharmacologic ကုသမှုများအတွက်အထောက်အထား 1 ကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled လေ့လာမှု မှလွဲ. , အသေးစား, Open-တံဆိပ်လေ့လာမှုများ, ကိစ္စတွင်စီးရီး, ဒါမှမဟုတ်နောက်ကြောင်းပြန်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏အဓိကအားပါဝင်ပါသည်။ ဒီသက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီး, CSB နှင့်အတူလူနာတွေအတွက်အများအပြား pharmacologic ကုသမှုရွေးချယ်စရာရှိစေခြင်းငှါ, သို့သော် CSB အဘို့အဘယ်သူမျှမ FDA ကထောက်ခံချက်ပေးထားတဲ့ဆေးရှိပါတယ်။
စိတ်ကျရောဂါ။ CSB အတွက်ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာကုသမှုကိုအပြည့်အ ၀ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အမျိုးအစားတစ်ခုမှာရွေးချယ်သော serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ဖြစ်သည်။ အများအပြားနောက်ကြောင်းပြန်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်အမှုစီးရီး CSB ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချအတွက် SSRI များ၏ယေဘုယျထိရောက်မှုအပေါ်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။20-23 Citalopram တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု. အကဲဖြတ်ခဲ့ CSB များအတွက်သာကုသမှု, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ကြိမ်နှုန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ / drive ကိုအပါအဝင် CSB ရောဂါလက္ခဏာတွေသိသာထင်ရှားစွာလျှောက်လျော့နည်းနှင့်ဆက်စပ်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုခံခဲ့ရသည်။24
SSRIs အပြင်, အများအပြားထပ်တိုးအမှုအစီရင်ခံစာများ CSB ကုသတဲ့အခါမှာအခြားအထိုကဲ့သို့သော serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors နဲ့သုံးဘီးဆိုင်ကယ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants အဖြစ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants ၏အတန်း, သို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးအကျိုးရှိသောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြသည်။25 အများအပြားအမှုအစီရင်ခံစာများ clomipramine သုံးပြီး CSB လက္ခဏာတွေသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုညွှန်ပြကြသည်။22 nefazodone ၏တစ်ဦးကနောက်ကြောင်းပြန်လေ့လာမှုကိုလည်း CSB ကုသမှုအတွက်တစ်ခု option ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ လူနာ nefazodone ယူပြီးစဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ obsessive / compulsive ၏ကြိမ်နှုန်းအတွက်မှတ်သားလောက်လျှော့ချအစီရင်ခံနှင့်မျှမတို့မှတ်သားလောက်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများကဖော်ပြခဲ့သည်။26 nefazodone, Serzone, တစ်ခုမှာ branded ဗားရှင်းရှားပါးပေမယ့်ပြင်းထန်တဲ့အသည်းပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ 2004 အတွက်အမေရိကန်ဈေးကွက်ကနေဆုတ်ခွာခဲ့သည်။
CSB ဆက်ဆံဖို့လက္ခဏာအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အချို့ကနဦးသက်သေအထောက်အထားများ, အထူးသဖြင့် SSRIs သာ 1 ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေးသာ Single-ဘာသာရပ်အမှုနှင့်အတူဤဆေးဝါးများအလားအလာအကျိုးရှိသောဖြစ်စေခြင်းငှါ, တွေ့ရှိချက်ဝေးအပြီးသတ်သောထံမှဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သော်လည်းလေ့လာဆေးဝါးများအများအပြားအဘို့အသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
Naltrexone တစ်ခု opioid ရန်, မရရှိနိုင်ဖြစ်ပွားမှုကနေ Open-တံဆိပ်လေ့လာမှုများနှင့်နောက်ကြောင်းပြန်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းထောက်ခံမှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။17,27 CSB အတွက် naltrexone ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်သက်သေအထောက်အထားအစီရင်ခံစာများနှင့်နောက်ကြောင်းပြန်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအမှုန့်သတ်ထားပေမဲ့, ရလဒ်များကိုအပြုသဘောခဲ့ကြပြီ။ Naltrexone monotherapy အဖြစ်အသုံးပြုသည့်အခါ CSB လက္ခဏာပြင်းထန်မှုအတွက်မှတ်သားလောက်လျှောက်လျော့နည်းပြနှင့်အခြားကုသမှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်အခါသိရသည်။
ပိုးသတ်ဆေး။ ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းများအရအချို့သောဆေးဆန့်ကျင်ဆေးများသည် CSB ကိုကုသရာတွင်အကျိုးရှိနိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ Topiramate အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သော option ကိုဖြစ်နိုင်သည်။28 အမှုအစီရင်ခံစာများတွင် CSB များအတွက်အကျိုးရှိဖေါ်ပြခြင်းကတခြား anticonvulsants valproic acid ကို, lamotrigine နှင့် levetiracetam ပါဝင်သည်။18
CSB များအတွက် psychotherapy ၏တိကျသောအမျိုးအစားများကိုထောက်ပံ့သက်သေအထောက်အထားကန့်သတ်သည်နှင့်အများအားဖြင့်ထိန်းအကွပ်မဲ့လေ့လာမှုများနှင့်အမှုအစီရင်ခံစာများကနေရေးဆွဲ။
သိမှု - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုထုံး (CBT) သည် CSB အတွက်အသုံးပြုသောအသုံးအများဆုံးစိတ်ရောဂါကုထုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ များစွာသောထိန်းချုပ်မှုမရှိသောလေ့လာမှုများနှင့်ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်းများက CBT သည် CSB အတွက်အကျိုးရှိသည်ဟုဆိုသည်၊ နည်းစနစ်များမှာကွဲပြားသည်။
အများအပြားကအမှုပေါင်းစိတ်ခွန်အားနိုးသူများအားအင်တာဗျူးနှင့်အတူ CBT ပေါင်းစပ်ပြီးထိုကဲ့သို့သောအလုပ်နာရီအတွင်းအွန်လိုင်းသုံးစွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နှင့်အချိန်ပမာဏ၏ကြိမ်နှုန်းအဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။29,30 Group မှ CBT လည်း CSB များအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။31
လက်ခံမှုနှင့်ကတိက ၀ တ်ပြုမှုကုထုံး (ACT) သည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောလေ့လာမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု ၁ ခုနှင့်အတူကန ဦး အထောက်အပံ့အချို့ရရှိခဲ့သည်။32,33 အဆိုပါထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုတစ်ချောင်းမြောင်း-စာရင်းအခွအေနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးချင်းစီအက်ဥပဒေ 12 အစည်းအဝေးများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။32CSB လက္ခဏာတွေအတွက်တိုးတက်မှု3လကြာထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်အလုံးစုံလျှော့ချရေး 92 လအကြာလေ့လာမှုအဆုံးသတ်ချက်ချင်းပြီးနောက် 86% အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်နှင့် 3% ခဲ့သည်။
အိမ်ထောင်ရေး / ဆက်ဆံရေးကုထုံးကိုဖြစ်ရပ်စီးရီးများနှင့်ဖြစ်ရပ်များဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာများတွင်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျပန်းလုပ်ထားသောပရိုတိုကောကို အသုံးပြု၍ CSB ကိုကုသရာတွင်၎င်း၏ထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းမရှိချေ။ အဖြစ်အပျက်အစီရင်ခံစာ ၁ တွင်အိမ်ထောင်ရေးလိင်ကုထုံးတွင်ပါ ၀ င်မှုသည် ၁ နှစ်နှင့်သင်ခန်းစာ ၂၀ အတွင်းသိသာသောတိုးတက်မှုများရရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။34
ကန့်သတ်သုတေသနနှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီစံ၏မရှိခြင်းစနစ်တကျရှာဖွေရေးမှာများနှင့်ဆက်ဆံဖို့စိန်ခေါ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကနဦးသက်သေအထောက်အထားအချို့စိတ်မကျဆေး Antidepressants နှင့် psychotherapeutic ကုသ CSB လက္ခဏာတွေကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုအကြံပြုထားသည်။
Carnes PJ ။ မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲက: နားလည်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ။ 3rd ed ။ Center ကိုစီးတီး, MN: Hazelden ထုတ်ဝေရေး; 2001 ။
Celexa • Citalopram
Lamictrigine • Lamictal
Valproic အက်ဆစ်• Valproic